Falanqeyn: Maxay Armeniya iyo Azerbayjaan ugu Socdaan Dagaal? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Falanqeyn: Maxay Armeniya iyo Azerbayjaan ugu Socdaan Dagaal?
Afrikaan.so — October 4, 2020
Colaada soo jireenka ah ee udhaxeysa Armeniya iyo Azerbayjan ayaa cirka isku sii shareertay maalmahaan lasoo dhaafay, waxaana labada dal soo gaaray khasaarahoodii ugu xumaa muddo afar sano ah. Intii u dhaxeysay luulyo 12 iyo 16, ugu yaraan 16 xubnood oo ka kala tirsanaa labada dhinac ayaa ladilay: afar askari oo Armenia ah iyo 12 Azerbayjaaniyaan ah, oo uu kujiray masuul sare oo jeneraal ahaa. (Askari shanaad oo reer Armeniya ah ayaa u dhintay dhaawacyadii soo gaaray dabayaaqada bishaas luulyo.)
Dagaalkaas wuxuu ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday bishii luulyo ee sanadkaan 2020. Dagaal kale oo xooggan ayaa maalmahaan ka dhex qarxay Armeniya iyo Azerbayjaan taasi oo la xiriirta muran dhanka xudduuda ah, haddaba waxaan warbixintan ku egaynaa maxaa kalifay isku dhacyadaan? Armeniya iyo Azerbayjaan waxaa gobolkan ku dhexmaray dagaal xooggan sanadihii siddetamaadkii iyo sagaashamaadkii, waxaana dagaalladaas ku dhintay tobonaan kun oo qof halka malaayin qofna ay guryahooda isaga qaxeen. Waxay labada dal horey u wada gaareen heshiis xabad joojin inkasta oo aanan weligiis la dhaqan gelin, dagaalladan waxay ahaayeen kuwa dhaca mararka qaar.
Xilligii midowgii Soofiyeet gobolkaasi wuxuu noqday gobol madax-bannaan oo ka tirsan jamhuuriyadda Azarbayjaan
Caalamkana waxaa looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol madax-bannan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Azarbayjaan
Turkigu si aan gabbasha lahayn wuxuu u taageeraa Azarbayjaan
Ruushka wuxuu xaruumo militari uu ku leeyahay Armeniya
Dagaalka maalmahaan socday, dalka Armeniya ayaa waxay ku eedeeyeen Azerbayjaan inay weerar loo adeegsaday diyaarado iyo hubka altalariga ay soo qaadeen. Waxay sidoo kale wasaarada gaashaandhigga Armeniya sheegtay inay ka jawaabtay weerar lagu soo qaaday.
Xukuumadda Armeniya ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaradaha nooca helekobtarada islamarkana ay burburiyeen taangiyo ayna ku dhawaaqeen xaalad militari oo degdeg ah. Labada dal ayaa ku muransan gobolka Nagorno-Karabakh islamarkana waxaa halkaas horey ugu dhexmaray isku dhacyo kooban.
Mas’uuliyiinta gobolka Nagorno-Karabakh waxay habeennimidi Isniinta sheegeen 26 askari iney dagaalka uga dhinteen taasoo qasaaraha dagaalkaasi ka dhashay ka dhigeyso in ka badan 80. Dalal badan ayaa walaac aad u weyn ka muujiyey dagaalkan ku soo cusboonaaday labada dal iyada oo ay soo jiiteen quwadaha labadaasi dal deriska la ah sida Turkiga, Ruushka iyo Iiraan.
Waddamadaasina waxay xaaladda gobolka ka soo cusboonaatay u daneynayaan maadaamaa tuubbooyinka saliidda iyo gaaska ee ugu muhiimsan ay dalalkaasi dagaallamaya dhexmaraan. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa dhinaciisa ugu baaqay labada dal in ay joojiyaan dagaalka xooggan ee ka dhex qarxay.
Dagaalki ugu dambeeyey ee labada dal ayaa Axaddi bilawday, inkasta oo labada dal Azarbayjaan iyo Armeniya uu midba midka kale ku eedeynayo colaadda soo cusboonaatay inuu isagu billaabay. Labada dalna waxay diyaarsadeen ciidamo tira badan iyaga oo meelaha qaar kaga dhawaaqay xaalad dagaal. Dagaalkan ayaa ah kii ugu cuslaa oo labada dal dhex mara iyada oo dagaal 2016-dii labada dal dhex maray ay ku dhinteen ugu yaraan 200 oo qof.
Turkiga wuxuu ku dhawaaqay inuu taageerayo Azarbayjaan, halka Ruushka oo xaruumo militari ku leh Armeniya isla-markaana saaxib la ah Azarbayjaan uu labada dal ugu baaqay xabbad joojin degdeg ah. Armeniya waxay Turkiga ku eedeysay iney taageero militari oo toos ah ay siiso Azarbayjaan si ay ula wareegto gacan ku haynta dhulka lagu muransan yahay, balse eeddaasi waxaa dhinac isaga dhigay Turkiga.
Gobolka ayaa caalamku u aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay Azerbayjaan, balse waxaa gacanta ku haya dad asalkoodu yahay Armeniya. Armeniya iyo Azerbayjaan ayaa waxaa ay labaduba ka tirsanayeen xukunkii Shuuciga ahaa ee xilligii midowgii Soofiyeet.
Iyada oo ay dagaalada socdaan, ayaa madaxwaynaha Azerbayjaan Ilham Aliyev waxaa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dib ay gacanta ugu dhigi doonaan gobolkaasi ka go’ay. Xaalad militari ayaa sidoo kale lagu soo rogay qaar ka mid ah gobolada dalka Azerbayjaan. Muranka buuraleyda Caucasus ayaa ahaa mid soo daba jiitamayay muudo 30 sano ah islamarkana aan xal loo helin in ka badan 30 sanadood.
Jamhuuriyadda Azarbayjaan oo saliidda qaniga ku ah ayaa soo ifbaxday 20-kii sano ee ugu dambeeyey isla-markaana noqotay dal door weyn ku leh tamarta gobolka, kaddib markii ay 1991-kii ay madax bannaanida ka qaadatay Midowgi Soofiyeet. Suuqa iyo macamiisha lala sameeyo soo saarayaasha tamarta ee heer caaami ayaa Azarbayjaan u suuragelisay iney adeegsato dakhliga ka soo gala dhinaca tamarta si ay u abuurto sanduuq maalgashi oo ay maamusho dowladda kaasoo ka qayb qaadan doono mashaariic caalami ah. Azarbayjaan waxay dhaqaalaheeda sida oo kale u isticmaashay dib u dhiska awoodda ciidankeeda tallaabbadaasi oo loo arkayey iney muhiimad gaar ah u leedahay maadaamaa ay dagaal kula jirto Armeniia oo ay ku muransan yihiin gobolka gooni u goosadka ee Nagorno-Karabakh.
In kasta oo ay sii kordheysay hodantinimada iyo saameynta Jamhuuriyadda Azarbayjaan ay ku leedahay gobolka, haddana saboolnimada iyo musuqmaasuqa dalkaasi ka jira ayaa aad u wiiqay horumarka dalka.
Sug wax yar, dagaal baa dhacay, sideese u dhacay?
Burburkii Midowga Soofiyeetka wuxuu sababay khilaaf bahalnimo oo aan wali xal loo helin mudo 30 sano ah. Muranka xadduudahana ee u dhaxeeyo labadaan dal waa khilaaf weyn ee la iska illooway kala jabkii Soofiyeeti kadib, dagaalka ka socday 1992 ilaa 1994 oo labada wadanba wali ku mashquulsan yihiin waxay kaliftay burbur iyo isir naceyb aan halkaan lagu soo koobi karin.
Dagaladaan u dhaxeeyo labadaan wadan waxaa ugu yaraan u geeriyooday 20,000 oo qof, halka milyanna ay ku barakaceen isir sifeyn – qiyaastii boqolkiiba 70 ka mid ah waa reer Azerbayjaan oo ka cararaya dhulka ay Armeniya haysato, iyo inta kale ee reer Armeniya ee ka cararaya dhulka ay Azerbayjaan haysato.
Ubucda dagaalka waa Nagorno-Karabakh, oo ah dhul aad u qurux badan oo buuraley ah – magaceeduna macnihiisu yahay “Beer madow oo buuraley ah” —taas oo albaabka weyn ku leh mala awaalka jacaylka labada dal. Iyada oo qayb ka ah la wareegitaankii Soofiyeeti ee Transcaucasus sanadihii 1919-1920, waxaa loo qoondeeyay Jamhuuriyadda Azarbeyjaan ee Soofiyeedka Hanti-wadaagga ahaa. Intii Armeniya iyo Azerbayjaan ay labaduba ka mid ahaayeen boqortooyadii Soofiyeeti; dad badan oo reer Armeniya ah waxay ku noolaayeen jamhuuriyadooda dariska ah iyo taa lidkeed.
Farqiga diimeed ee u dhaxeeya inta badan waa Kiristanka Orthodox Armeniya iyo Muslimiinta Sunniga ah ee Azerbayjan sidoo kale waa dowlad rasmi ah oo diin-laaweyaal ah, laakiin marka laga hadlaayo mudaaharaadyada qowmiyadeed ee ka dhacay halkaas iyo kuwa la dilay ayaa lagu qiimeeyay kuwa la aqbali karo 1980-yadii, dadka degan Armeniya waxay bilaabeen inay si xoog leh uga baanaan baxaan shacabkooda, iyo olole la sheegay in Azerification-ka ay ku hayaan maamulka magaalada Baku.
Armeniya iyo Azerbayjaan waxay iska dileen dad badan wuxuuna soo billowday Kacaankii Ruushka ka dib, Inta badan dagaalladu ma lahayn qaab aasaasi ah oo qaab dhismeed hubaysan leh. Dagaalkii Nagorno-Karabakh, wuxuu ahaa isku dhac qowmiyadeed iyo dhuleed oo dhacay dabayaaqadii 1980-meeyadii ilaa May 1994, oo ka dhacay xadka Nagorno-Karabakh ee koonfur-galbeed Azerbayjaan, oo u dhexeeya qowmiyadaha ugu badan ee Armeniya Nagorno-Karabakh oo ay taageerayaan Armeniya, iyo Jamhuuriyadda Azerbayjaan.
Arrintaasi waxay keentay rabshado 1989-1990, labadaba Nagorno-Karabakh iyo magaalooyinka Azerbayjaan ee Baku iyo Sumqayit, halkaas oo pogroms-ka dhan ah Armeniya ay keentay in milatariga Soofiyeeti uu dhaqan geliyo sharciga dagaalka si loo joojiyo rabshadaha, wax yarna laga faa’iido. erayga “pogrom waa rabshado rabshado wata oo loogu talagalay xasuuqa ama cayrinta qowmiyadeed ama koox diimeed’
Markii la gaaray 1991, Midowgii Soofiyeeti burburay, dagaal u dhaxeeyay labada ummadood ee dhowaan soo ifbaxay ee ku saabsan dhulka lagu muransan yahay — kaasoo si aan kala sooc lahayn ugu dhawaaqay madax-bannaanidiisa Azerbayjan — ayaa ahayd mid lama huraan ah, gaar ahaan hoggaamiyeyaashu waxay u arkeen jingoismka inay tahay waddo sahlan oo lagu xoojiyo awooddooda. Erayga “Jingoism waa wadaninimo qaab siyaasad gardarro leh oo firfircoon, sida u ololeynta dal u adeegsiga hanjabaadaha ama xoogga dhabta ah, kana soo horjeedda xiriirka nabadeed, dadaallada lagu ilaalinayo waxa ay u aragto inay yihiin danaha qaran.”
Dagaalka laftiisu wuxuu ahaa mid naxdin leh mararka qaarkoodna xambaarsan farsamo. Burburka ciidankii Soofiyeeti wuxuu abuuray tiro aad u tiro badan oo calooshood u shaqeystayaal Ruush ah, oo ka dagaallamayay labada dhinac, mararka qaarna habbeenkii beddelayay.
Dambiilayaashu waxay ku barwaaqoobeen fowdada; maalintii kaliya ee duulimaadyada dib uga kaceen inta udhaxeysa Baku iyo Yerevan waxay ahayd markii mooryaan reer Armeniya ah uu dhintay 1993, tan iyo markii asxaabtiisa Azerbayjaan ay doonayeen inay xushmeeyaan aaskiisa. Kadib, dib u gurasho bilow ah ayaa bilowday, Armeniya waxay gacanta sare ku yeelatay aakhirkiina waxay dhalisay xabad joojin, xabbad joojintaas oo ay ka shaqeeyeen Moscow iyo 1994 taasoo ka dhigtay Armeniya inay maamusho inta badan Nagorno-Karabakh.
Armeniya iyo Azerbayjaan waxay ku dagaallameen Nagorno-Karabakh 1988-94, ugu dambayntiina waxay ku dhawaaqeen xabad joojin. Si kastaba ha noqotee, weligood heshiis kama gaarin khilaafka. Dagaalkan hadda socda ayaa ah kii ugu xumaa ee la arko tan iyo xabad joojinta oo labadii Jamhuuriyadood ee hore ee Soofiyeeti midba midka kale uu eedaynayo.
Maamulka isku magacaabay halkaas ayaa sheegay inay garaaceen garoonka diyaaradaha ee Ganja kadib markii ciidamada Azerbayjaan ay duqeeyeen caasimada gobolka, Stepanakert. Azerbayjaan waxay sheegaysaa inaysan jirin goobo militari oo Ganja ah oo ay duqeeyeen. In ka badan 220 qof ayaa dhimatay tan iyo markii iska hor imaadyadu billowdeen toddobaad ka hor.
Waxaa jira cabsi ah in tirada dhimashada dhabta ah ee militariga dhinacyada oo dhan iyo sidoo kale dadka rayidka ah ay intaas ka badnaan karto, maadaama sheegashooyinka khasaaraha aan si madax-bannaan loo xaqiijin. Milatariga Azerbayjaan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dib ula wareegeen toddobo tuulo tan iyo Axadii lasoo dhaafay, halka Nagorno-Karabakh ay sheegtay in ciidamadoodu ay “hagaajiyeen” jiidaha hore ee dagaalka.
Horraantii toddobaadkan, Armeniya waxay sheegtay inay “diyaar u tahay inay dhex gasho” dhexdhexaadiyeyaasha ka socda Faransiiska, Ruushka iyo Mareykanka si ay isugu dayaan inay u oggolaadaan xabad joojin.
Azerbayjaan oo ay si cad u taageerto dawladda Turkiga ayaa dalbatay in laga saaro ciidamada Armeniya Nagorno-Karabakh iyo meelaha ku dhow ee ay qabsadeen ciidamada qowmiyadaha Armeniya. “Nagorno-Karabakh waa dhulkeenna,” Madaxweynaha Azerbayjaan Ilham Aliyev ayaa ku sheegay khudbad telefishanka laga sii daayay maalintii Axadda, isagoo ka dalbanaya Armeniya inay raaligeliso dalkiisa ayna siiso jadwal ay uga baxayaan.
“Tani waa dhammaadkii. Waxaan tusnay cidda aan nahay. Waxaan u eryanaynaa sida eeyaha oo kale.” – Ayuu yiri madaxweynaha Azerbayjaan
Dhanka kale, masuuliyiinta Nagorno-Karabakh waxay sheegeen inay burburiyeen garoonka diyaaradaha ee Ganja. Waxay sheegeen inay ficil sameeyeen ka dib markii Stepanakert ay ku dhacday gantaalo isla markaana ay ku eedeeyeen in xarunta Ganja ay u adeegsadeen ciidamada Azerbayjaan inay weeraro ka geystaan ​​goobaha rayidka.
Khasaare xoog leh ayaa laga soo sheegayaa Stepanakert, oo koronto la’aan ay ku dhacday, sida ay soo warinayso wakaaladda wararka ee Armenpress. Basas dad ah ayaa la arkay iyagoo ka baxaya magaalada Sabtidii.
Armenpress ayaa soo xigatay hogaamiyaha gobolka gooni u goosadka, Arayik Harutyunyan, isagoo ka digaya in “wixii hada ka dambeeya xarumaha militariga ee sida joogtada ah loo geeyay magaalooyinka waaweyn ee Azerbaijan ay yihiin bartilmaameed sharci ah ciidanka difaaca”
Mr Harutyunyan wuxuu intaas ku daray inuu hada amar ku bixiyay in madaafiicda la joojiyo, “si looga hortago dhimashada dadka rayidka ah ee nabada aan waxba galabsan”. Turkiga ayaa cambaareeyay duqeynta Ganja, isagoo ku eedeeyay Armenia inay “bartilmaameedsatay dadka shacabka ah”. Laakiin afhayeenka wasaarada gaashaandhiga Armeniya Shushan Stepanyan ayaa sheegtay in “wax dab ah noocuu doono ha ahaadee aan laga fureynin dhulka Armeniya jihada Azerbayjaan”.
Armeniya waxay taageero militari iyo mid dhaqaale siisaa Nagorno-Karabakh iyadoon si rasmi ah u aqoonsanayn gobolka is magacaabay.
Tags: Falanqeyn: Maxay Armeniya iyo Azerbayjaan ugu Socdaan Dagaal?
Next post Dilkii George Floyd, Maxaa Isbedelay Cunsuriyada Mareykanka?
Previous post Wax Kabaro Cilmiga Dhaqaalaha